फिल्म ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’ को पालुङमा छायांकन सुरु - City Post Daily
फिल्म ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’ को पालुङमा छायांकन सुरु
February 14, 2021 February 25, 2021 मनोरञ्जन
काठमाण्डौ, २ फागुन । फिल्म ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’को बिहीवारबाट पालुङमा छायांकन सुरु भएको छ । अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठलाई अब नयाँ फिल्म ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’ मा पनि हेर्न पाइने भएको छ । रोचक कुरा चाहिँ के छ भने फिल्मको निर्माता सौगात आफैं हुन् ।
बिहीवारबाट पालुङमा छायांकन सुरु भएको फिल्ममा सौगात र सृष्टिसँगै खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, पशुपति राई, दिव्य देव पन्त, पुस्कर गुरुङलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ । अभिनेता दयाहाङ राई र निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेत पनि फिल्ममा विशेष भूमिकामा देखिनेछन् । सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण हुने फिल्मको निर्देशन सुवर्ण थापाले गरिरहेका छन् ।
१५ दिन पालुङमा छायांकन गरेपछि निर्माण टिम बाँकी छायांकनका लागि काठमाडौं फिर्ने तयारीमा छ । स्टारकास्ट ठूलो भए पनि फिल्म भने सानो बजेटमा निर्माण हुने निर्देशक थापाले जानकारी दिए । सुवर्णले सौगात (आदियोगी भिजन) सँग सहकार्य गरेर निर्माण गरिरहेको फिल्मको छायाँकार नरेन्द्र मैनाली हुन् । काली प्रसाद बाँस्कोटाले संगीत भरेको फिल्ममा द्वन्द्व रहने छैन ।
अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा कसलाई थाहा नहोला र ! तीन वर्षदेखि एकअर्काको प्रेममा रमाइरहेको यो जोडी पर्दामा समेत छुटिन सकेको छैन । फिल्म ‘मासु भात’ बाट सुरु भएको उनीहरुको सहकार्यले ‘पोइ प¥यो काले, माइकल अधिकारी, तीन जन्तु’ सम्म निरन्तरता पायो । यो जोडी चाँडै ‘सँगसँगै’ नामक फिल्ममा काम गर्ने तयारीमा छ ।
अचेल सौगातले आफूलाई अफर हुने फिल्ममा सृष्टिलाई अभिनेत्रीको रुपमा सिफारिस गर्ने गरेको चर्चा छ । तर, यसप्रकारको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको उनीहरु दाबी गर्छन् ।
यसैगरी, नेपाली फिल्म निर्देशक दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्ने नेपाली फिल्म ‘तिमीसँगै हुने मन छ’बाट मुम्बईका रोहित सुचान्तीले डेब्यू गर्ने भएका छन् । रोहित ‘तुने प्यार क्या किया’ र ‘रिश्ता लिखंगे हम नयाँ’ लगायत आधा दर्जन टेलिसिरियलका लिड अभिनेता हुन् । साथै उनले रियालिटी शो बिग बोस १२ मा भाग लिएका थिए ।
‘तिमीसँगै हुने मन छ’मा यस अगाडी नै अभिनेत्री दीपिका प्रसाईं अनुबन्धित भइसकेकी थिइन् । २१ बर्षिय रोहितसँगको सम्झौताको लागि निर्देशक भट्टराई केहि समय अघि मुम्बई पुगेका थिए । चैतको पहिलो हप्ताबाट छायांकनमा जान लागेको सिनेमामा अन्य कलाकारहरु भने केहि दिनपछि फाइनल गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ । ओम नम शिवाय प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने सिनेमामा प्रेम कथामा आधारित हुनेछ । यो फिल्ममा सम्पूर्ण टेक्निकल टिम बलिउडबाट झिकाईने बताईएको छ ।
Click to see more at The Succulent Source. cialis malaysia So good, actually, that we had to see for ourselves.
रक्तदान गर्न र गराउनको निमित्त आह्वान
‘सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन’को उपाधि सेनाका रोकायालाई